Valin'ny UNWTO ho an'i Kenya: Iza no afaka manakana ity Sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili ity ?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Valin'ny UNWTO ho an'i Kenya: Iza no afaka manakana ity Sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili ity ?
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Kenya Breaking News • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • malaza ankehitriny
Misy taratasy eo am-panamboarana ao amin'ny Foiben'ny UNWTO any Madrid.
Ity taratasy ity dia andrasana hilaza hoe TSIA amin'ny tolo-kevitr'i Kenya hampiantrano ny fivoriambe.
Mety ho kapoka amin'ny fizahantany, mampiady hevitra ary tia tena.
Misy afaka manakana ny famokarana ity taratasy ity ve?
Taorian'ny nampahafantaran'ny UNWTO ireo firenena mpikambana fa tsy mety ho toerana hanaovana ny fivoriambe ho avy i Maraoka, dia nanolo-tena hampiantrano ny hetsika kosa i Kenya tamin'io andro io.
Nifandray tamin'ny Maraoka Vaovao farany FR, Zoubir Bouhoute, manampahaizana momba ny fizahantany sady talen'ny Filankevitry ny fizahantany faritany (CPT) ao Ouarzazate, dia manenina ireo fanapahan-kevitra izay maneho loza ho an'ny fizahantany Maraokana izay miezaka manasitrana ny ratra vokatry ny krizy Covid-19.
I Kenya no laharana faharoa tamin'i Maraoka, Filipina ary Maraoka nanolotra ny hampiantrano ny fivoriambe tamin'ny GA farany tany Saint-Pétersbourg, roa taona lasa izay. Anjaran'i Kenya izao?
Tsy takona afenina, fa zava-bita lehibe ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO very fanantenana ny famindrana ny hetsika avy any Maraoka ho any Madrid.
Tamin'ny volana Janoary dia nisy Filankevitra Mpanatanteraka taolam-paty nivory tao Madrid tao anatin'ny firaketana an-tsoratra ny fipoahan'ny Corona, ny curfew ary ny vonjy taitra amin'ny toetrandro. Tsy maintsy nanoro an'i Zurab Pololikashvili ho SG fanindroany izany. Na ny praiminisitr'i Zurab any Zeorzia aza dia tonga nanasa ireo solontena mpifidy rehetra hisakafo hariva iray alohan'ny fifidianana, ka namela ny hany kandidà nanao fampielezan-kevitra hanohitra an'i Zurab tao anaty haizina.
Kandidà fanampiny 5 no nanana olana tamin'ny fomba ofisialy hitan'ny Sekretera UNWTO, tsy afaka namerina ny antontan-taratasy sy ny fampielezan-kevitra hanoherana an'i Zurab noho ny fe-potoana fohy napetraka izay nahagaga ny rehetra.
Ny fisian'ny Fivoriambe ao amin'io tanàna io ihany dia mety hiteraka fanodinkodinana bebe kokoa amin'ny fizotran'ny fifidianana sekretera jeneraly. Ny Fihaonambe dia tsy maintsy mifidy amin'ny tolo-kevitry ny Filankevitra Mpanatanteraka ary manamafy.
Nandritra izany fotoana izany, Zurab Pololikashvili pnametraka anjara roa tamin'ny vao haingana toe-javatra misy an'i Arabia Saodita. Niteraka resabe teo amin'i Espaina sy Arabia Saodita momba ny fampiantranoana ny foiben'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana izany. Nandray anjara tamin’izany ny Sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana.
eTurboNews vao avy nampahafantarin'ny loharanom-baovao azo antoka ao amin'ny UNWTO ao Madrid:
Misy taratasy iray novolavolain'ny sekretera UNWTO ho an'ny Minisitra Kenya androany, mamaly ny tolo-kevitry ny minisitra hampiantrano ny fivoriambe any Kenya.
Andrasana ny hisaorana ny Minisitra Najib Balala noho ny tolotra tsara nampiantrano ny Fihaonambe ity taratasy ity.
Ny taratasy dia ho TSIA noho ny politikan'ny fotoana, manondro fe-potoana 40 andro, na dia namaly ny UNWTO aza ny Minisitra Balala tao anatin'ny 24 ora.
Ao anatin'ny 24 ora Kenya nandefa fangatahana tany amin'ny UNWTO Madrid amin'ny Sunday, efa nivondrona tao ambadik'i Kenya izao tontolo izao. Io no isan’ny dinika nifanaovan’ireo mpitarika ao amin’ny filankevi-pitantanan’ny fizahantany afrikanina ny alahady teo.
Raha jerena ny toe-javatra iampangana an'i Zurab ho nanao hosoka tamin'ny fifidianana, nanimba ireo firenena mpikambana tamin'ny hetsika HQ, dia ho tombontsoany indrindra ny tsy hiteraka toe-javatra hafa ahafahan'ireo firenena mpikambana mahita mazava tsara fa ny UNWTO dia momba ny fifidianana azy, fa tsy momba ny fizahantany. miverina amin'ny lalana.
Raha nanontaniana i Gloria Guevara, tale jeneralin'ny WTTC teo aloha sady mpanolotsaina amin'izao fotoana izao ao amin'ny minisitry ny Fizahantany ho an'i Arabia Saodita. eTurboNews: "Miezaka ny handray anjara aho izao."
Mety ho talata androany ho an'ny UNWTO, Kenya, ary ny tontolon'ny fizahantany.
Oktobra 31, 2021 ao amin'ny 06: 10
Zurab Pololikashvili no sekretera jeneraly vaovaon'ny United … mifidy mba hialana amin'ny “fahamenarana” sy ny “fanajana ny tsy fivadihana”. Ny tena zava-dehibe, ny fameperana amin'ny fitsangatsanganana dia manakana ny fizahan-tany amin'ny fanomezana ny fahafahany hanorina hoavy tsara kokoa ho an'ny rehetra.